The New Oil Deal - Is Putin Playing Chess and Will Deal Fall Through? - Communal News: Online Business, Wholesale & B2B Marketplace News
नयाँ तेल डिल - के पुतिन शतरंज खेल्दै छ र डील पतन हुनेछ?
सम्पादकको पिक अप्रिल 17, 2020 अप्रिल 16, 2020 क्रिस्टिना किटोवा एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, मध्य पूर्व, रूस, रूस फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, साउदी अरब, भेनेजुएला
एक नयाँ सम्झौताको पश्चिममा ठूलो आशावादको साथ हेरिँदैछ, तर यो अकाल हो?
रसियाले घटाउने वास्तविक संख्या सम्झौतामा उल्लिखित के बराबर छैन।
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था र तेल उद्योगमा ठूलो प्रभाव रहेको छ।
नयाँ साउदी - रसो तेल सम्झौता अन्तर्गत साउदी अरेबिया र रसियाले २ oil देशले बजारबाट दिनहुँ 23 9.7 लाख ब्यारेल रोक्ने सम्झौताको एक हिस्साको रूपमा तेल कटौतीको रेकर्डको नेतृत्व गरेका छन्। पश्चिमी प्रकाशनहरू, सहित न्यू यॉर्कर, यस हप्ता शीर्षकहरू जस्तै "लेखहरू दौडिनुभयो"रूसी साउदी तेल युद्ध कसरी चिन्तित भयो Put सबैको लागि पुतिन। "
रोयटर्सका अनुसार तेल उत्पादन प्रति दिन २० करोड ब्यारेलले घटाउन सकिन्छ जुन विश्वको तेल आपूर्तिको २०% बराबर छ। मस्को र रियादबीच सम्झौताको घोषणा भएदेखि तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो। रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुतिनले कटौती सम्झौताको पुष्टि गरे। ओपेक देशहरू दुई वर्षको लागि तेल उत्पादन घटाउने सम्झौतामा आए।
मे देखि जून २०२० सम्म: उत्पादन प्रति दिन १० करोड ब्यारेलले घट्ने छ
जुन देखि डिसेम्बर २०२० सम्म प्रति दिन million लाख ब्यारेल।
जनवरी २०२१ देखि अप्रिल २०२२ सम्म - प्रति दिन million लाख ब्यारेल।
यो सम्भव छ कि रूसले यस गर्मीमा सम्झौताको मार्ग परिवर्तन गर्न सक्दछ। रूसले यो कुरा सुनेर रोमाञ्चित छैन कि साउदी अरेबियाले रूसलाई युरोपियन बजारबाट निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। ईयू सदस्य अर्थतन्त्रहरूले कोरोनाभाइरस महामारीको साथ कठोर हिट गरिरहेका छन्। यो धेरै सम्भावना छ EU सदस्यहरूले यस वर्ष कडा मन्दीमा प्रवेश गर्नेछन् र हाइपरइन्फ्लेसन पछि उनीहरूले यस गिरावटमा पूर्ण प्रभावहरू महसुस गर्छन्.
तसर्थ, साउदी अरामकोले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई भुक्तानीमा 90 ० ढिलाइ प्रदान गर्न शुरू गर्यो। स्थगित साउदी बैंक कोष मार्फत सम्भव छ। खरीद सम्झौता एक प्रोमिसरी नोट समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई रसिद पछि 90 दिनको लागि उत्पादनको लागि भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ। EU को भयानक अवस्था दिईएको छ, यो प्रस्ताव एकदम आकर्षक छ। थप रूपमा, साउदीहरूले प्रति ब्यारल १० डलर छुट दिन्छ।
यसभन्दा अघि विश्वव्यापी उर्जा बजारको स्थितिको बैठकमा पुतिनले भनेका थिए कि उनको देशले तेल उत्पादन घटाउने विषयमा साउदी अरेबियासँग छलफल गरिरहेको छ। त्यस समयमा यो खबर पाइएको थियो कि उनीहरू प्रति दिन १० करोड ब्यारेल घटाउने कुरा गरिरहेका थिए।
युएसएसआर-वर्तमान तेल उत्पादन डाटा।
रूसी क्रूड मध्य महिनामा युरोपमा पुर्‍याउनु पर्ने थियो, तर प्रति ब्यारेलको मूल्य हिजोसम्म १$ डलरभन्दा तल झरेको छ। यसको मतलब रूसी क्रूड कम्पनीहरूले घाटा लिन सक्ने छ। सौदीहरूले भुक्तानी डिफरल प्रस्तावले रूसी तेललाई सस्तोमा बेच्न बाध्य पार्छ, प्रतिस्पर्धा अफसेट गर्नका लागि वा सौदीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न आफैलाई स्थगित गर्न। प्रति ब्यारल १$ डलर भन्दा कम, रूसी कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा नाफाबाट वञ्चित छन्, र रूसी बजेटले यसको अधिकांश राजस्व गुमाउँछन्।
तेल उत्पादन घटाउनको लागि गरिएको सम्झौताको इच्छित परिणामहरू हुनेछ (तेलको मूल्यहरूको स्थिरीकरण)?
गत वर्ष, उपलब्ध डाटा अनुसार रसियाले 560 करोड उत्पादन गरेको छ टन तेल को। एक टोनमा .7.4..XNUMX ब्यारेल तेल हुन्छ।
सबै भन्दा राम्रो रूसी उत्पादन प्रति दिन 1 लाख ब्यारेल द्वारा कटौती गर्नु पर्छ। समग्रमा, सम्पूर्ण वर्षमा यसको मतलब प्रति पात्रो बर्ष 365 XNUMX मिलियन ब्यारेलको कटौती हुनेछ। प्रतिशतको दृष्टिकोणबाट यो त्यति धेरै हुँदैन। यदि तपाईं यस कटौतीलाई सहमति गरिएको सम्झौतासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने यसले रूसी बजेटलाई कुनै चोट पुर्‍याउँदैन वा कुनै लामो समयसम्म दिगो प्रभाव पनि राख्दैन।
ओपेक सदस्यहरू र अमेरिकाका आशावादी विचारहरू गर्मीमा माग बढ्ने छन्। यो एक अत्यधिक आत्मविश्वास प्रोजेक्शन हो। कोरोनाभाइरसको वैश्विक अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो प्रभाव रहेको छ र फलस्वरूप तेल उद्योगमा निश्चित प्रभाव पार्छ। यो आशा अवश्य पनि ससर्त हो किनकि रसिया, केएसए र संयुक्त राज्य जस्ता विविध खेलाडीहरूको ब्यवहारिक हिसाबले पहिल्यै भविष्यवाणी गर्न नसकिने र ठूलो यथार्थताको साथ अनुमान गर्न सकिन्छ। सम्झौताको हस्ताक्षरले सकारात्मक शेयर स्टक बजारमा प्रभाव पारेको छ। महामारी पछि, शेयर बजार ऐतिहासिक तल्लो देखाउँदै छ र यो सम्झौता विश्वास बलियो बनाउन मद्दत।
क्रेमलिन एक वाइल्ड कार्ड नै रहेको छ र यो भन्न गाह्रो छ कि यदि उनीहरूले अगाडि बढेको सम्झौताको सम्मान गर्दछन् भने। KSA अर्को अन्धकार घोडा हो जुन उनीहरूको अंशहरूमा सम्भव समस्याहरू छन्। भेनेजुएला र रूस र अमेरिका कसरी त्यस देशको नियन्त्रणको लागि भौगोलिक राजनीतिक संघर्षमा डुबेको छनौट नगर्नुहोस्।
जति नै यो सम्झौताको ऐतिहासिक सफलता थियो, क्रेमलिन सम्झौतामा टाँसिरहने संभावना 50०/50० छ। वास्तविक लाभ र नतीजाहरू हुन्छन् कि भनेर मात्र समयले बताउनेछ। अहिलेको लागि एक तुष्टीकरणमा पुगेको छ, तर कति समय सम्म?
ARAMCO सांप्रदायिक समाचार कच्चा EU युरोप जियोपोलिटिक्स तेल ओपेक राजनीति रूस सऊदी
अखबारले फ्रिल्यान्स ग्लोबल गिगलाई रोकेट-जस्तो बृद्धिलाई इग्ननेट गर्दछ
चीनको नयाँ डिजिटल क्रिप्टोकरन्सी र अमेरिकी विरोधी प्रोपेगान्डा